I-China 6061-T651 iAluminium Sheet yoMvelisi kunye noMthengisi | URuiyi
I-6061-T6 yenye yezona zinto zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kuma-alloys ealuminium angama-6000. Ngama-6000 amaphepha e-aluminium anikiweyo kubandakanya i-6061 kunye ne-6082 uthotho. Ngokukodwa, i-6061 sheet aluminium sheet iyimveliso emele phakathi kolu ngcelele. Eyona nto iphambili kolu luhlu lwealuminium sheet kubandakanya i-magnesium kunye ne-silicium element. Inempawu zombini zoluhlu lwe-4000 kunye ne-5000.
I-6061 T6 imbasa yealuminium Unokumelana okuphezulu kokumelana nazo zonke ii-alumum ezanyangelwe ubushushu. Yintsimbi eyenziwe nge-silicon kunye ne-magnesium. Inamandla asezantsi kunezinye ii-alumum ezifanayo, kodwa isasetyenziswa ngokubanzi. Oku kubangelwe kukunganyangeki kwayo ngumhlwa kwaye ngokuyinxenye ngenxa yeempawu zayo ezintle zoomatshini. Kukho iindlela ezahlukeneyo onokuthi uzenze i-6061 aluminums, ezinje ngomatshini kunye nokuwelda. Ukulinganiswa kwemishini yale alloy ngama-90 eepesenti. Inamandla amakhulu okujoyina. Ukuba iyafuneka, le mveliso inokufakwa i-anodised okanye ifakelwe ezinye izinto zokwaleka.
Izicelo ze-6061 aluminium alloys zihlala zisetyenziselwa ukufaka iipleyiti ezisisiseko, izinto zeelori, izixhobo zaselwandle, izinto zaselwandle, izixhobo zaselwandle, izihlanganisi zombane, izixhobo zombane kunye nokufakwa kweelensi zekhamera. Olu luhlu nje kuphela kuluhlu olubanzi lwezicelo ezisetyenzisiweyo. Ikwanakho ukubanakho ukusetyenziselwa izakhiwo zomsebenzi onzima ezifuna ukumelana nokubola kunye nomlinganiso wobunzima bamandla.
Unyango olushushu kunye nokusebenza okubandayo kunokusetyenziselwa ii-alloys ezingama-6061. Xa ukwimeko efakwe kwi-annealed, ukusebenza okubandayo kunokwenziwa ngokulula, kuyila imveliso yokuphela enqunyuliweyo, egximfiweyo, egrunjiweyo, etsalwe nzulu, egotyiweyo okanye ecofwe. Zonke ezi zinto zinokufezekiswa kusetyenziswa iindlela eziqhelekileyo zokusebenza.
Xa ubushushu bunyanga le alloy, ukufudumeza ngokucokisekileyo kufuneka kwenziwe nge-990 degrees F, emva koko kucinywe amanzi. Ukuqiniswa kwemvula, intsimbi kufuneka ibekwe kuma-320 degrees F iiyure ezili-18, umoya opholileyo, emva koko ubekwe kwi-350-degree F iiyure ezisibhozo, emva koko umoya upholile kwakhona.
Ukucaciswa kwephepha le-aluminium engama-6000
Loy ingxubevange: 6061 6063 6082 6A02 njl
Ubukhulu (mm): 0.6-5.0mm
Ububanzi mm (mm): 100-1800mm
♦ Isatifikethi: ISO9001, MSDS, SGS
Iphepha leAluminiyam engama-6061-T651 – (ASTM B209, QQ-A-250/11) Inika indibaniselwano yamandla anyukayo, ukuxhathisa umhlwa, kunye nokuchaneka okwenza ukuba ibe lelona banga lisetyenziswa kakhulu lealuminiyam. I-6061 Aluminium Sheet iyanyangeka ngobushushu, umelana nokuqhekeka ngenxa yoxinzelelo, kulula ukuwelda kunye nomatshini, kodwa kunciphise ukubekeka. 6061 Aluminium Sheet ilungele ulwakhiwo lolwakhiwo, iipleyiti ezisisiseko, igussett, isithuthuthu kunye neenxalenye zemoto, njl.Mill Finish - Not Polished
Ukungabinamandla, i-Brinell = 95, iTensile = 45,000, Isivuno = 40,000 (+/-)
Ubungakanani beSitokhwe esifumanekayo: 1ft x 1ft, 1ft x 2ft, 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft okanye Sika ukuya kubukhulu okanye kwiSimo seSiko.
Iimpawu ze-6000 Series Aluminium Sheet
♦ Luhlobo lwephepha lealuminium elinokubumba ngonyango olubandayo. Ngale nto, inokusetyenziswa kwiimeko ezinemfuno ephezulu kwi-anti-corrosion kunye ne-oxidation.
Ngenxa yokufumaneka kwayo okuhle kunye nesinxibelelanisi sayo esineempawu ezintle, kulula ukuba isongelwe kwaye inokuqhubekeka kakuhle.
Uit Ifanelekile ukuqhubekeka kokuqhubekeka kodonga lwamakhonkco kunye nodonga lwekhethini
Izicelo ze-6000 Series Aluminium Sheet
♦ Olu luhlu lwealuminium lusetyenziswa ekuqhubeni iinxalenye zeenqwelomoya, iinxalenye zekhamera, ii-couplers, iinxalenye zeenqanawa, izixhobo zekhompyutha, izixhobo ze-elektroniki kunye namalungu, iivelufa kunye namalungu e-valve, njl.
Sikwabonelela ngephepha le-aluminium, i-coil aluminium slit, i-5 bar aluminium yonyathela ipleyiti, umtya we-aluminium, i-coil aluminium anodizing, ipleyiti yokunyathela i-aluminium, i-aluminium coil, kunye nokunye. Ngolwazi oluthe kratya kuyo nayiphi na imveliso yethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ngenombolo yefowuni okanye nge-imeyile ebonelelwe kwiwebhusayithi yethu.
Njengomenzi we-aluminium wase-6061 wase China kunye nomthengisi, sivelisa i-coil aluminium camera, ipleyiti yealuminium, i-aluminium slit coil, umtya wealuminium, iphepha lealuminiyam, iphepha lealuminium njl njl. zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngokuthe ngqo
Egqithileyo I-3003 5052 iAluminiyam yedayimani yokuNyathela iPlate
Okulandelayo: I-Bright 1100 1050 3003 i-Aluminium e-Checkered Plate 3 Ibha ye-5 ye-Mirror i-Aluminium Sheet
Idayimani yokuNyathela iAluminiyam Sheet kwiSilivere
Ishiti yeTayimane yokuNyathela
Idayimani yokuNyathela i-Sheet Metal
5052 6061 6063 7075 itshekhi Aluminium ...